चितनवमा १७ वर्षीया सु,त्केरी र १७ दिनको शिशु अ,लपत्र छोडेर युवा फ,रार…खोजिदिन सक्दो शेयर गर्नुहोस!
चितवन, ६ असार । भरतपुर महानगरपालिका–११ गणेस्थानमा डेरा गरी बस्ने १७ वर्षीया युवती र उनकी १७ दिनको शिशु बि,चल्लीमा परेका छिन् । विवाहको प्र,लोभन देखाउदै क्षेत्रपुरका एक युवाले उनीसँग प्रेम स,म्वन्ध गाँसेका भएतापनि अहिले ति युवा फ,रार छन् ।
ति युवा कहाँ छन् ? भन्ने कुनै खबर थाहा नभएको युवती बताउछिन् । उक्त १७ वर्षी युवतीले श,ल्लेक्रियामार्फत् भरतपुर अ,स्पतालमा शिशुको जन्म दिएकी हुन् । अहिले सु,त्केरी युवतीको अवस्था द,यनीय छ । उनको डेरामा ७८ वर्षीया बुढी हजुरआमा र १७ दिनको शि,शु छ ।
शि,शुलाई पिलाउन आमाको दुध समेत राम्रोसँग नआएपछि ल्याक्टोजिन किन्ने समेत रकम नभएको युवतीकी हजुरआमाको भनाइ छ । सामान्य चिया पसल सञ्चालन गर्दै आँफ्नो जीवन चलाउदै आएका उनीहरु लकाडाउनका कारण आ,धापेट खाएर रात क,टाउने गरेका छन् ।
लकडाउनका का,रण उनीहरुको चिया पसल ब,न्द छ । ‘सानै उमेरमा नातिनीलाई प्र,लोभनमा पारेर यो अवस्थामा ल्याउने केटा फ,रार छ । स्थानीयको सहयोगमा प्र,हरीमा जा,हेरी त दिएका छौं’, युवतीकी हजुरआमा भन्छिन् ।
चिया पसलबाट हुने आम्दानीले आँफ्नो पेट पाल्दै आएकी उनले ब,न्दले गर्दा ४ महिनासम्मको घर भाडा तिर्न नसकेको र खाने कुराको समेत अ,भाव हुन थालेको उनी बताउँछिन् । ‘यसरी सबै तिरबाट हामी ग,रीबलाईनै दैवले घे,र्दा रहेछन्’, हजुरआमा रु,दै भन्छिन् ।
‘अहिले मेरो नातिनीलाई विभिन्न बहानामा आमा बनाएर फरार भएका युवालाई प्रहरीले खोज्छौ त भनेको छ । नानितीको अवस्था ना,जुक छ । डाक्टरलेल अ,प्रेसन गरेर पलातीनी निकाले । तर, अहिले आमाको दूध समेत नआउदा पलातिनीलाई के खुवाउने पिरलो छ । मसँग दुध किन्ने समेत पैसा छैन’ आँ,शु पुछ्दै भनिन् ।
सु,त्केरी युवतीको बि,चल्ली भएको खबर पाएलगत्तै बे,वारिसेहरुको ब्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्र चितवनले खाद्यान्न सहयोग गरेको छ । शनिबार युवतीको डे,रामा पुगेर चामल, नुन, तेल तथा केही लत्ता कपडा स,हयोग गरिएको सामाजिक अभियान्ता श्रेया रिजालले जानकारी दिइन् ।
केन्द्रले आमाको दूध राम्रोसँग नआएको भन्दै ल्याकटोजिन किन्नको लागि केही नगद समेत स,हयोग गरेको थियो ।
युवतीको अवस्था निकै द,यनीय रहेको भन्दै युवतीलाई बि,चल्लीमा पार्ने युवाको खो,जी गर्न रिजालले सबैमा अपील गरेकी छिन । उनी आफै पनि सु,त्केरी युवतीलाई व्यवस्थित स्थानमा स्थान्तरण गर्ने र युवालाई खोज्ने काममा लागेको उनको भनाइ छ ।
‘अहिले केही दिनको लागि पुग्ने खाद्यान्न सहयोग ग¥यौं, अब युवतीको न्यायको लागि लड्छौं’, रिजालले भनिन् । ति फरार युवाको घर भरतपुर क्षेत्रपुरमै भएको बुझ्न आएसँगै खोज्ने काम सुरु गरिएको रिजालले बताइन् ।News 24 Nepal Tv